Madaxweynaha Puntland oo ku baaqay in Garowe lagu qabto Shirarka looga hadlayo Maqaamka Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • August 25, 2019
Madaxweynaha Puntland Saciid C/llaahi Deni ayaa shaaca ka qaaday in Puntland ay diyaar u tahay inay marti geliso shirarka looga hadlayo Geeddi socodka Arrimaha Siyaasadda Soomaaliya.
Guddiga Cusub ee Doorashooyinka Puntland oo maanta la dhaariyay (Sawiro)
Guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland ayaa maanta lagu dhaariyay xarunta Madaxtooyada Puntland ee magaalada Garowe iyadoo uu goobjoog ka ahaa Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni.
Puntland oo si kulul uga jawaabtay dalabkii Madaxweyne Farmaajo
Sagal Radio Services • News Report • July 21, 2019
Maamulka Puntland ayaa jawaab ka bixiyay dalabkii Madaxweyne Farmaajo ee ahaa in si shuruud la’aan lagu sii daayo xubno ka tirsna dhismaha Wadada Boosaaso oo Khamiistii la soo dhaafay la xiray.
Puntland oo dadaal ku bixinaysa sidii dib loogu furi lahaa isu socodka Garoowe iyo Boosaaso
Ku dhowaad muddo toddobaad ah oo hakad uu ku jiray isu socodka magaalada xarunta ah ee Garoowe iyo magaalada Boosaaso ayaa hadda waxaa socda dadaallo lagu raadinayo sidii dib loogu furi lahaa, kaddib markii daadadkii ka dhashay roobabkii dhawaa ay waxyeelo ka soo gaartay waddada dheer ee xiriira deegaannada.
Madaxweynaha Puntland oo ku celiyay inay caddaalad heli doonto gabar 12 jir ah oo Gaalkacyo ku geeryootay
Sagal Radio Services • News Report • March 19, 2019
Madaxweynaha Puntland , Siciid Cabdullaahi Deni ayaa xafiiskiisa ku qaabilay ehelada Caasha Ilyaas Aadan Qarjab oo dhowaan kufsi iyo dilka loogu geystey magaalada Gaalkacyo.
Sagal Radio Services • News Report • February 19, 2019
Maamulka Puntland ayaa Albaabada isugu dhuftay xarun uu Xisbiga mucaaradka ah ee Wadajir ka furtay magaalada Garowe ee Caasimada maamulka Puntland.
Madaxweynaha Puntland oo ka hadlay dilkii Madaxii DP World ee Dekeda Boosaaso
Sagal Radio Services • News Report • February 4, 2019
Madaxweynaha Puntland Saciid C/llaahi Deni ayaa ka hadlay dilkii saaka nin hubeysan uu gudaha Dekeda Boosaaso ugu geystay Madaxii Shirkadda P&O ee DP World oo gacanta ku heysay maamulka Dekeda Boosaaso.
Madaxweyne Farmaajo oo soo dhoweeyay kulamadii mira dhalka ahaa ee Garowe
Sagal Radio Services • News Report • January 29, 2019
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo oo galabta Muqdisho kusoo laabtay ayaa uga mahadceliyey shacabka iyo madaxda Dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland soo dhaweyntii wanaagsanayd ee ay u fidiyeen isaga iyo wufuudii Soomaaliyeed ee ka qeyb galay caleema-saarka Madaxda cusub ee Puntland.
Madaxweyne Farmaajo oo balan-qaaday wada shaqeynta Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada
Sagal Radio Services • News Report • January 27, 2019
Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo oo ka qayb-galay munaasabad lagu caleema-saaray Madaxda Dowlad Goboleedka Puntland ayaa sheegay in Dowladda Federaalka ay ka go’an tahay adkeynta wadashaqeyn buuxda oo ka dhaxeysa Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada dalka.
Hogaamiyaal aan Muqdisho isku arki karin oo caawa madal qura ku kulmaya.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta ku wajahan magaalada Garoowe, halkaas oo ay uga sii horreeyaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ugu awoodda badan.
Sagal Radio Services • News Report • January 9, 2019
Madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid C/llaahi Deni ayaa wareysi dhinacyo badan taabanaya oo uu siiyay Telefishinka BBC Somali kaga hadlay arrimo kala duwna oo quseeya Federaalka iyo muranka iyaga iyo Somaliland.
Wafdi Wasiiro iyo Xildhibaano ka socday dowladda Federaalka oo loo diiday inay tagaan Garowe
Sagal Radio Services • News Report • January 6, 2019
Wararka laga helayo garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa sheegaya in wafdi Wasiiro iyo Xildhibaano ka tirsan dowladda Federaalka ay ku xayiran yihiin garoonka, iyagoo sugaya ogolaansho ay ugu kicitimaan magaalada Garowe, kaddib markii Maamulka Puntland uu amar ka soo saaray in aanay deegaanada imaan karin mas’uuliyiinta dowladda Federaalka inta lagu guda jiro doorashada Puntland.
Baarlamaanka Puntland oo maanta dooranaya Guddoomiyaha Baarlmaanka.
Sagal Radio Services • News Report • January 2, 2019
Magaalada Garowe ee xarunta Puntland waxaa ka socda diyaar-garowga doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland.
Madaxda Maamul goboleedyada oo sameystay Xisbi siyaasadeed gaar ah
Madaxda afarta maamul goboleed ee Puntland, Jubbaland, Galmudug iyo Koofur Galbeed ayaa isku raacay inay sameystaan Xisbi siyaasadeed gaar ah, kaddib markii uu u soo gabagaboobay shir afartii cisho ee la soo dhaafay uga socday magaalada Garowe.
Wasiirka Qorsheynta Jamaal oo ku guuleystay Kursi Xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka
Sagal Radio Services • News Report • October 7, 2018
Wasiirka Qorsheynta ee Xukuumadda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa ku guuleystay Kursi Xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka.
Wasiir ka tirsan Maamulka Puntland oo is casilay
Sagal Radio Services • News Report • September 23, 2018
Wasiirkii Deegaanka iyo is bedelada Cimilada dowlad goboleedka Puntland Cali C/llaahi Warsame ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkiisa, isagoo warqad istiqaalad ah u gudbiyay Madaxweynaha Puntland C/weli Gaas.
C/weli Gaas oo shuruud ku xiray wada hadal ay ka galaan dagaalka Tukaraq
Sagal Radio Services • News Report • July 30, 2018
Madaxweynaha Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa shuruud ku xiray wada hadal ay ka galaan dagaalka Tukaraq, inta Ciidamada Somaliland ay gacanta ku hayaan deegaano ay ka talin jirtay Puntland.
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo ku sii jeeda magaalada Garowe
Sagal Radio Services • News Report • July 28, 2018
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa ku sii jeeda magaalada Garowe ee caasimada Puntland.
Shir Amniga looga hadlayo oo maanta ka furmaya magaalada Garoowe
Sagal Radio Services • News Report • April 25, 2018
Maamul gobolleedka Puntland ayaa marti-gelinaya shir ku saabsan Xasilinta Amniga Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya oo lagu imartiqaaday mas’uuliyiinta wasaaradaha Amniga Xukuumadda Federaalka iyo maamul goboleedyada ka dhisan dalka.
Shir looga hadlayo arrimaha Socdaalka iyo Jinsiyadda oo ka furmay Garoowe.”Sawiro”
Sagal Radio Services • News Report • March 6, 2018
Madaxweyne ku-xigeynka Dowlad Goboleedka Puntland C/xakiin Cumar Cameey iyo Agaasimaha Guud ee hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda G/Sare Maxamed Adan Koofi ayaa maanta magalada Garoowe si wada jir ah uga furay Shirka Sedax billaha ah ee Hay’adda Socdaalka oo markii ugu horeysay Garowe lagu qabtay.
Farmaajo “Rajadayda ayaa ah in ardayda waxbaratay ay wax u qaban karaan dalka,(Sawiro)
Sagal Radio Services • News Report • January 9, 2018
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta khudbad u jeediyey ardayda wax kabarata jaamacadaha Puntland ayaa sheegay in uu rajo wanaagsan ka qabo mustaqbalka dalka maadaama ay kordhayaan xarumaha waxbarasho ee dalka.
Sargaal Xaday Saxiixa Madaxweynaha Puntland oo Garoowe lagu xiray
Ciidamada Amaanka Puntland ayaa waxaa la sheegay in ay Xabsiga dhigeen Taliyaha laanta ilaalada cashuuraadka puntland Axmed Cabdi Sugulle,kaasi oo lagu eedeeyay inuu Isticmaalay Saxiixa Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdi Weli Maxamed Cali gaas.
Faah Faahino kasoo baxaya Dil Magaalada Garawe loogu geestay Eng.Cabdirashiid Bulxan Boqor Cismaan
Sagal Radio Services • News Report • September 25, 2014
Habeenimadii xalay Magaalada Garawe ee Caasimada Maamulka Soomaaliyeed ee Puntiland waxaa lagu dilay Eng.Cabdirashiid Bulxan Boqor Cismaan oo kamid ahaa hawlwadeenada hay’adda waddooyinka Puntland ee PHA.